Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Andiana générie diesel vaovao nambaran'ny Generac Mobile
Generac Mobile, mpanamboatra menara maivana finday, mpamokatra herinaratra, heater, paompy ary famotehana vovoka, dia nanambara androany ny fampidirana ireo gazoala diesel vaovao lehibe - ny mpamokatra finday MDE330 sy MDE570 diesel, izay mikendry ny hanomezana fahafaham-po ny asa sy ny fikojakojana. . Ireo milina vonona amin'ny fanofana dia misy varavarana azo esorina misokatra malalaka mba hampitomboana ny fahafaha-miasa amin'ny alàlan'ny famelana ny teknisianina hahatratra ny teboka fanompoana rehetra. Ny famolavolana vy sy fanamboarana vy maranitra dia ahafahana miasa amin'ny fampiharana isan-karazany, na inona na inona toetr'andro.
Ny MDE330 dia misy maotera 9.3L Perkins Tier 4 Final-voamarina, raha toa kosa ny MDE570 dia mampiasa maotera 18.1L Perkins Tier 4 Final-Certified. Ireo motera roa ireo dia manolotra teknolojia fitantanana haino aman-jery maharitra Perkins Exhaust Temperature Management (ETM), manala ny olan'ny fametahana lena mandritra ny toe-javatra ambany sy tsy misy enta-mavesatra, izay mety hitranga raha toa ka tsy dia refesina na lehibe loatra ho an'ny asa ny mpamokatra gazoala. Ireo motera ao amin'ny MDE330 sy MDE570 vaovao an'ny Generac dia natao hisorohana ny fametahana lena amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ny hafanan'ny setran'ny motera ary manome hafanana fanampiny, raha ilaina izany.
"Generac Mobile dia manome hery azo itokisana izay mandeha amin'izay ilanao izany, manome ny mpanjifa fahaizana sy fanaraha-maso hahafahana mamita ilay asa - na aiza na aiza misy izany", hoy i Aaron LaCroix, mpitantana ny vokatra, Generac Mobile. "Amin'ny alàlan'ny haitao mandroso sy haingam-pandeha mahomby, mamela ny fotoana maharitra sy elanelam-potoana maharitra ireo sampan-draharaha eto aminay mba hahafahanao mijanona ao amin'ilay asa lava kokoa, miaraka amin'ny famahanana solika sy fikojakojana kely."
Ny MDE330 sy MDE570 an'ny Generac dia tonga fenitra miaraka amin'ny elanelam-potoana misy menaka sy sivana mandritra ny 500 ora hampihenana ny fikojakojana sy fihenan'ny fihenan'ny andro. Ny solika lehibe sy ny tanky DEF dia mamela fotoana fohy farafahakeliny 25 ora alohan'ny ilana famenoana solika, mampitombo ny fiverenan'ny fampiasam-bola.
Ny endri-javatra azo isafidianana dia misy ny fitomboan'ny fahaizan'ny motera manomboka, ny toetr'andro mangatsiaka ary ny safidy fizarana herinaratra fanampiny. Ho an'ny malefaka farany, ireo singa ireo dia azo alamina amin'ny paralleling, ahafahana manakaiky ny herin'ny hery.
Ny Controller PowerZone® Pro Sync dia misy fenitra amin'ny singa roa, mamela ny mpampiasa hanara-maso ny fahombiazany ary hanao diagnostika amin'ilay singa. Ny mpanara-maso dia hita eo aorinan'ilay masinina tokony ho 5 metatra, 6 santimetatra miala ny tany amin'ilay kinovan'ny lalana hahazoana fidirana mora. Ny mpanara-maso PowerZone® Pro Sync dia mametraka ny fifehezana ny milina sy ny fampahalalana amin'ny toerana iray, amin'ny fisehoana touchscreen mora ampiasaina izay mampiseho kaody diagnostika sy fampahalalana manampy.
Ny MDE330 sy MDE570 vaovao dia ho hita fa hanafatra sy hitanisa amin'ny Q4 2021 ary ho azo alefa amin'ny Q2 2022.